the Kali Linux - Hacker တွေ အသုံးများဆုံး OS - Part 8 - Khit Minnyo
Kali the Kali Linux - Hacker တွေ အသုံးများဆုံး OS - Part 8
by KhitMinnyo on May 13, 2022 in Kali
The Command Line - Part 1
Kali ဆိုတာ Debian Based Linux Distro ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ Kali command ဆိုတာတွေသည် တကယ်တော့ Debian Linux Command တွေနဲ့ အတူတူပါပဲ။ ထူးထွေဆန်းပြားတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ အချို့က Kali နဲ့ Ubuntu ဆိုရင် command မတူဘူး ထင်တတ်ကြပါတယ်။ တကယ်တော့ ကွဲပြားနေတာမဟုတ်ရပါဘူး။
ပြောစရာရှိလာတာကတော့ အရင်တုန်းက Kali Version တွေမှာက bash shell ကို သုံးခဲ့ကြပါတယ်။ ခု zsh shell ကို ပြောင်းသုံးလာတဲ့အတွက် ပိုလွယ်လာတာပါ။ အရင်တုန်းက Directory တစ်ခုကို ဝင်ချင်ရင် cd နဲ့ ဝင်မှ ရပါတယ်။ ခုက directory နာမည်ရိုက်ထည့်ပြီး တိုက်ရိုက် ဝင်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လို့ ဘယ်မှာဖြစ်ဖြစ် သုံးတတ်အောင် procedure ကျကျပဲ လုပ်ကြတာ ပိုကောင်းပါတယ်။ OK?
Terminal ဖွင့်တဲ့အခါ user@host_name ဆိုတဲ့ ပုံစံကို မြင်ရပါမယ်။ user ဆိုတာက login ဝင်ထားတဲ့ Acc ရဲ့ ussername ဖြစ်ပါတယ်။ hostname ဆိုတာကတော့ Kali ကို install လုပ်စဥ်က သတ်မှတ်ပေးထားခဲ့တဲ့ hostname ဖြစ်ပါတယ်။ : ရဲ့ နောက်မှာ မြင်နေရတဲ့ ~ သင်္ကေတကတော့ လက်ရှိ ရောက်ရှိနေတဲ့ directory ကို ပြ ပါတယ်။ ~ သည် Home directory ရဲ့ သင်္ကေတ ဖြစ်ပြီးတော့ လက်ရှိသုံးနေတဲ့ user account ရဲ့ Home directory ဖြစ်ပါတယ်။ User ရဲ့ Home Directory သည် ဘယ်ထဲမှာ ရှိလဲဆိုရင်တော့ /home/ ဆိုတာထဲမှာ ရှိပြီး ရှေ့ဆုံးက / သည် system ကို ကိုယ်စားပြုပါတယ်။ နောက်က / တွေကတော့ အထဲမှာ ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ပါ။ ဒါကြောင့်မို့ /home/ ဆိုတာသည် system ထဲက home ဆိုတဲ့ directory (folder) ထဲမှာ ရှိတယ် လို့ ဆိုလိုပါတယ်။ Linux system မှာ Folder ကို Directory လို့ သုံးပါတယ်။ ခုကနေစပြီး directory လို့ပဲ ရေးပါမယ်။
File Manager ကနေ ဖွင့်ကြည့်မယ်ဆိုရင် လည်း ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လို့ Linux ကို သုံးနေတယ်ဆိုမှတော့ Command ကနေ လုပ်ဆောင်တာတွေကို ဖယ်ထားရင် Linux taste ကို ဘယ်ရနိုင်တော့မှာလဲ။ ဒီတော့ Terminal သုံးပြီးတော့ပဲ လုပ်လို့ရတာအကုန် လုပ်ကြတာပေါ့။
LS ကို အသေးစာလုံးနဲ့ ရေးထားတာပါ။ လက်ရှိရောက်ရှိနေတဲ့ directory ထဲမှာရှိတဲ့ ဖိုင်တွေကို list ထုတ်ပြပါ လို့ system ကို စေခိုင်းလိုက်တာပါ။ ener လိုက်တာနဲ့ အထဲမှာ ဘာဖိုင်တွေရှိလဲဆိုတာကို list ထုတ်ပြပေးလာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖိုင်တွေနဲ့ directory တွေကို အရောင်ကွဲနဲ့ ပြပါတယ်။ အရောင်တွေကတော့ မိမိတို့ settings လုပ်ထားတာပေါ် မူတည်ပြီး ကွဲပြားနိုင်ပါတယ်။ ဘာမှ မလုပ်ဘဲ တင်ထားတဲ့အတိုင်းပဲ သုံးတယ်ဆိုရင်တော့ executable file တွေကို အစိမ်းရောင်၊ directory (folder) တွေကို အပြာရောင်၊ စာဖိုင်တွေကို အဖြူရောင် စတဲ့ စာနဲ့ ဖော်ပြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိမှာတော့ Kali တင်ထားပြီး ဘာမှ မရှိသေးဘူးဆိုရင် Terminal ဖွင့်ဖွင့်ချင်း ls လို့ ရိုက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ Home Directory ထဲမှာ ရှိတဲ့ Desktop, Documents, Downloads, Music, Movies စတဲ့ directory တွေကိုသာ တွေ့ရမှာပါ။ dot (.) နဲ့ စတဲ့ hidden file တွေကိုပါ တွေ့ချင်ရင်တော့ ls -al (LS -AL အသေးချည်း) ရိုက်ထည့်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဆိုရင်တော့ .bashrc .zshrc စတဲ့ hidden file တွေကိုပါ မြင်ရမှာပါ။ -al မှာတော့ permission တွေကိုပါ မြင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာတော့ အဲဒါတွေ မပြောသေးပါဘူး။ ls တစ်ခုကို နားလည်ရင် အဆင်ပြေပါပြီ။ Windows မှာဆိုရင်တော့ Linux setup လုပ်မထားဘူးဆိုရင် dir လို့ သုံးရပါတယ်။ Win Store ကနေ Ubuntu or Kali စတဲ့ Linux တစ်ခုခု ထည့်သွင်းထားပြီးရင်တော့ ls သုံးလို့ ရနိုင်ပါတယ်။
directory တစ်ခုကနေ တစ်ခုကို ပြောင်းချင်ရင် cd (change directory) ကို သုံးပါတယ်။ (Windows မှာလည်း အတူတူပါပဲ။) အကယ်၍ ကျွန်တော်တို့က လက်ရှိ Home directory ကနေ Desktop ပေါ်ကို ရွှေ့ချင်တယ်ဆိုရင် cd Desktop လို့ ရိုက်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ရှေ့တစ်ဆင့် ပြန်သွားချင်ရင်တော့ cd .. ဆိုပြီး ပြန်သွားနိုင်ပါတယ်။ ဘယ်နေရာရောက်နေနေ လက်ရှိ user acc ရဲ့ Home directory ကို ပြန်သွားချင်ရင်တော့ ~ ကို ရိုက်ရပါမယ်။
ဒီ command တွေကို Linux (Ubuntu, Debian, Kali, ...) စတာတွေမှာသာမက Android က Termux, MacOS က Terminal တို့မှာပါ အလားတူ အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အတူတူပါပဲ။
system ထဲကို ဝင်ချင်တယ်ဆိုရင် cd / လို့ ရိုက်ထည့်ရပါမယ်။
khitminnyo@aio:~# cd /
System ထဲက opt ထဲကို ဝင်မယ်။ အဲထဲကမှ etc ထဲကို ဝင်မယ် ဆိုရင် (system သည် ရှေ့ဆုံးက / ဖြစ်ပြီး ထဲဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ပါတိုင်း / သုံးပါမယ်) ဒါဆိုရင် ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတော့ cd /opt/etc/ ဆိုပြီး ရိုက်ထည့်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
သတိထားရမှာကတော့ Linux မှာ စာလုံး အကြီးအသေး အလွန်တိကျပါတယ်။ လွဲလို့မရပါဘူး။ နောက်ပြီး Directory မဟုတ်ဘဲ ဖိုင် ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင် cd နဲ့ တွဲသုံးလို့ ရမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါ့ပြင် Terminal မှာ ကိုယ်ဘယ်နေရာရောက်နေသလဲဆိုတာကို သိထားဖို့လည်း လိုအပ်ပါတယ်။ မဟုတ်ရင် အဆင်မပြေတာတွေပဲ ကြုံနေရမှာပါ။
khitminnyo@aio:~# mkdir directory_name
အထက်ပါအတိုင်း mkdir နဲ့ directory ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။ mkdir = make directory ပါ။ ဥပမာ ကျွန်တော်တို့က Desktop ပေါ်မှာ test ဆိုတဲ့ Directory တစ်ခု ဖန်တီးချင်တယ်ဆိုပါစို့။
khitminnyo@aio:~# mkdir ~/Desktop/test
အထက်ပါအတိုင်း ရိုက်နိုင်ပါတယ်။ ဒါဆိုရင် Terminal မှာ ဘယ်နေရာရောက်နေနေ Home(~) ထဲက (/) Desktop (Desktop) ထဲမှာ(/) test ဆိုတဲ့ directory တစ်ခုကို ဖန်တီးပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Desktop ပေါ်မှာ သွားကြည့်ရင်လည်း test ဆိုတဲ့ folder ကို မြင်ရမှာပါ။ Desktop ပေါ်မှာ ဘာမှ မမြင်အောင် ဖျောက်ထားခဲ့ရင်လည်း File Manager ထဲကနေ Desktop ကို ဖွင့်ကြည့်ရင် မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
khitminnyo@aio:~# rm -rf ~/Desktop/test
ဒီလိုရိုက်ရင် Desktop ပေါ်က test folder ပျက်သွားမှာပါ။ rm (remove) ကို ဖိုင်တွေ၊ folder တွေကို နေရာရွှေ့တာ၊ နာမည်ပြောင်းတာ နဲ့ ဖျက်တာအတွက် သုံးနိုင်ပါတယ်။ ဖိုင်တစ်ခု ဖန်တီးပြီး ဖျက်ကြည့်ရအောင်။
khitminnyo@aio:~# touch ~/Desktop/test.txt
touch command ကို ဖိုင်တွေ ဖန်တီးဖို့အတွက် သုံးပါတယ်။ အထက်ပါ ပုံမှာ touch ကို သုံးပြီး Desktop ပေါ်မှာ test.txt ဆိုတဲ့ text file တစ်ခုကို ဖန်တီးလိုက်ပါတယ်။ ပြီးတော့ Terminal ကနေ Desktop ပေါ်ကို ဝင်ကြည့်ရင် test.txt ကို တွေ့ရမှာပါ။
khitminnyo@aio:~# cd ~/Desktop && ls
command တစ်ကြောင်းထက်ပိုပြီး ဆက်သုံးချင်တဲ့အခါ && ကို သုံးပြီး ဆက်နိုင်ပါတယ်။ (၂လုံး ထပ်ရေးရတယ်နော်)
ဒါဆိုရင်တော့ Terminal မှာ လက်ရှိ ဘယ်နေရာကိုရောက်နေနေ Desktop ပေါ်ကို ဝင်လိုက်မှာဖြစ်ပြီး ls ကြောင့် list လုပ်ပေးသွားမှ ဖြစ်ပါတယ်။ လောလောဆယ် Desktop ပေါ်ကို ရောက်နေပြီဆိုတော့ အဲသည်ဖိုင်ကို ဖျက်ကြည့်ရအောင်။ မဖျက်ခင် လက်ရှိ ဘယ်နေရာကို ရောက်နေသလဲဆိုတာ ကြည့်လို့ရတဲ့ command ကို အရင်ပြောပြပါမယ်။
pwd ဆိုတာ print working directory ရဲ့ အတိုကောက်ပါ။ လက်ရှိ ရောက်နေတဲ့ directory ကို ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ အထက်ပါပုံမှာ ကြည့်မယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်သည် လက်ရှိမှာ ~/Desktop မှာ ရှိနေတာကို တွေ့ရပါမယ်။ my acc သည် khitminnyo ဖြစ်လို့မို့ /home/khitminnyo/ ဆိုတာသည် ကျွန်တော့်ရဲ့ Home directory ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ ~ သည် /home/khitminnyo ဆိုတာနဲ့ အတူတူပါပဲ။ (Mac OS မှာဆိုရင်တော့ /Users/khitminnyo/Desktop လို့ ပြမှာပါ။ Home directory တွေရဲ့ တည်နေရာကတော့ system configure လုပ်ထားတဲ့အတိုင်း (ကျွန်တော်တို့လုပ်ရတာမဟုတ်) ကွဲပြားမှု ရှိနိုင်ပါတယ်)
Directory လည်း မှန်ပြီ။ ls နဲ့ ကြည့်တဲ့အခါလည်း ကျွန်တော်တို့ ဖျက်မယ့်ဖိုင်ကို တွေ့ပြီဆိုရင်တော့ rm နဲ့ ဖျက်နိုင်ပါပြီ။
khitminnyo@aio:~# rm -rf text.txt
ဒါဆိုရင်တော့ text.txt ဆိုတဲ့ ဖိုင် ပျက်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အကယ်၍ direcctory မတူရာကနေ လှမ်းဖျက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဖိုင်တည်နေရာကိုပါ ထည့်ပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ -
khitminnyo@aio:~# rm -rf ~/Desktop/test.txt
ဒီစာကို ဖတ်ပြီးရင် လေ့ကျင့်သင့်တာက directory ဖန်တီးတာ၊ ဝင် ထွက် ဖျက် ဆောက် တွေကို လေ့ကျင့်ရမှာပါ။ ဆောက် ဆိုတာက making directory or file ကို ဆိုလိုတာပါ။
အကယ်၍များ Directory တစ်ခုတည်းမှာ ရှိသမျှကို အကုန်ဖျက်ချင်ရင်တော့ asterisk (*) ကို ထည့်ရပါမယ်။
khitminnyo@aio:~# rm -rf ~/Desktop/*
အထက်ပါအတိုင်း ရိုက်ထည့်လိုက်ရင် Desktop ပေါ်က ရှိသမျှ အကုန် ပျက်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
khitminnyo@aio:~# sudo rm -rf /*
အထက်ပါအတိုင်း ရိုက်ထည့်မိရင်တော့ system ထဲမှာ ရှိသမျှ အရာအားလုံး ပျက်သွားမှာဖြစ်လို့ လုံးဝ မရိုက်ပါနဲ့ဗျ။
ဒီနေ့တော့ ဒီလောက်နဲ့ပဲ ရပ်ပါမယ်။ စာရိုက်ရတာ အဆင်ပြေမနေလို့ပါ။ နောက်နေ့မှ ဆက်တင်ပေးသွားပါမယ်။
လာရောက် ဖတ်ရှုမှုအတွက် ကျေးဇူးပါဗျ
By KhitMinnyo on May 13, 2022